Xildhibaano Jeesow oo ka digay inay colaad sababan doorashooyinka ka dhacay maamulka Jubbaland – Kalfadhi
Xildhibaano Jeesow oo ka digay inay colaad sababan doorashooyinka ka dhacay maamulka Jubbaland
Xildhibaan Saahir Amiin Jeesow oo ka tirsan mudenayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka digay in magaalada Kismaayo ay ka dhacaan dagaalo ay sabab u noqon karaan doorashooyinkii dhawaan ka dhacay halkasi.
Jeesow ayaa ku dhalliilay maamulkii madaxweyne Axmed Maxamed Islaam (Madoobe) inuu ahaa midkii ugu dhibaateynta badnaa ee Jubbaland soo mara.
‘’ Haddii aan xal kale la helin, Kismaayo waxa ay noqon doontaa goob colaad, ’’ ayuu yiri xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka hadlay madal ay isugu tageen xildhibaannada labada aqal ee baarlamaanka oo shalay lagu qabtay Muqdisho.
Dhinaca kale, Xildhibaan Maxamed Xasan Ganey oo kamid ah xildhibaannada laga soo doorto Jubbaland oo wareysi siiyay Kalfadhi ayaa xildhibaan Jeesow iyo xildhibaan Dalxa ku eedeyay in aysan waxba kala socon arrimaha Kismaayo, hase ahaate ay kaliya dhaliilan shaqooyinka uu qabto maamulka Axmed Madoobe.
‘’ Waxaan u maleynayaa Jeesow iyo Dalxa eedeyn kaliya ayay la joogan Muqdisho,waxaa Kismaayo ugu dambeysay 2010-kii.’’
Xildhibaannada labada gole ee baarlamaanka ayaa kula kala qeybsan natiijadii doorashada maamulka Jubbaland .
Garoowe: Shirka guddiga dastuurka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo galay maalintii labaad